Isingeniso esona sichaphazelekayo seMestallate acetate powder | AASraw
Isingeniso esona sichaphazelekayo seMestallate acetate powder
/Blog/Meestrol acetate/Isingeniso esona sichaphazelekayo seMestallate acetate powder
ezaposwa ngomhla 07 / 01 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Meestrol acetate. Ibe 0 Comment.
Yonke into malunga ne-Megestrol i-acetate powder
Ukuhlolwa kwe-acetate ye-1.Megestrol (i-CAS: 595-33-5)
I-2.Usebenza njani i-acetate ye-Megestrol?
I-3.Iyiphi i-meestrol acetate ipowder efanelekileyo ithathwe?
I-4.Ziziphi izicwangciso ezizodwa phambi kokuba uthathe i-megestrol i-acetate powder?
5. Ndingayithatha njani i-megestrol acetate powder?
6.Sebenzisa i-Megestrol acetate Powder kwiindawo ezithile
7. Yintoni endimele ndiyazi malunga nokugcinwa nokulahla le mayeza?
I-8.Megestrol i-acetate side effects
I-9.Megestrol I-Acetate Usetyenziso lwe-Weight Gain kufuneka liqwalaselwe ngononophelo
I-10.Iyiphi inkcazelo ebaluleke kakhulu ukuba ndiyazi malunga ne-Megestrol Acetate powder?
11.Ungafumana phi ulwazi olungakumbi kwi-Meestrol Acetate?
I-Megestrol acetate powder ividiyo
I.Meestrol acetate powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: Megestrol acetate powder
I-molecular Formula: C19H26O3
Isisindo somzimba: 302.41
Isitoreji sokugcina: Iqondo lokushisa
1. Meestrol acetateukuhlolwa (CAS:595-33-5)
I-Megestrol i-acetate powder yindlela yokwelashwa kwe-hormone. Kwakhona kuthiwa iMegace okanye i-megestrol (595-33-5). Yindoda eyenziwe inguqu ye-hormone progesterone. Iprogesterone enye yeehomoni zamabhinqa kodwa amadoda avelise inani elincinane.
I-Megestrol i-acetate powder yonyango lwala ma-khansa alandelayo abuyele okanye asasazeka apho aqala khona.
♦ umdlavuza webele
♦ Umhlaza wesibeleko
Kwakhona unyango olungasondelanga ukutya. Ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uthathe ukuba ulahlekelwe isisindo ngenxa yomhlaza okanye unyango. Oogqirha banokuyisebenzisa kwakhona njengonyango lwabasetyhini abaneentshukumo ezifudumele ngenxa yomhlaza okanye unyango lwabo.
2. Ingaba kwenzeka njani Meestrol acetatemsebenzi?
I-acetate ye-Megestrol yindlela yokwelapha i-hormone. IiHormones zizinto zephemikhali eziveliswa zizigulane emzimbeni, ezingena kwigazi kwaye zenze iziphumo kwezinye iifom. (Ngokomzekelo, i-hormone testosterone eyenziwa ngamathambo ayenaxanduva lwempawu zesintu ezifana nokuphakamisa ilizwi kunye nokwanda kweenwele zomzimba). Ukusetyenziswa kwonyango lwe-hormone ukunyanga umdlavuza kusekelwe ekugqibeleni ukuba ama-receptors amaharmone athile afunekayo ekukhuleni kweseli aphezulu emanqenqeni amathumba. Iirmone zokwelapha zisebenza; ukuyeka ukuveliswa kwehomoni ethile, ukuvimbela i-hormone receptors, okanye ukufaka ama-agent afanayo okhemikhali kwi-hormone esebenzayo, engasetyenziselwa iseli lesisu. Iindidi ezahlukileyo zonyango ze-hormone zihlelwe ngumsebenzi wazo kunye / okanye uhlobo lwe-hormone eyenziwa.
I-megestrol acétate yi progestin (ifomu eyenziwe ngumntu we progesterone yehommone). Unempahla ephazamisa umjikelezo wesi-estrogen. Oku kuphazamisa ukukhuthazwa kokukhula kweseli kwii-cell tumor cells. Kuye kucatshangelwa ukuba yiphumo elithe ngqo kwicala lomdonga we-uterine (endometrium).
Impembelelo yecala ye-Megestrol acetate iye yazuza inzuzo. Indlela echanekileyo yale mpawu ayicacanga, nangona iziphumo zikhokelela ekunyuseni kwamafutha omzimba. Ukusebenzisa le mpembelelo yecala, i-Megestrol acetate iye yafundiswa kwaye isetyenziselwa ukunyanga ukulahlekelwa yindlala (i-anorexia), ukuchithwa kwemizimba kunye nokulahleka kwesisindo esifana nomhlaza kunye noGawulayo.
3. Ingakanani i-megestrol ipetetate powder ithathwe bhetele?
Sebenzisa le mayeza (Megestrol acetate powder) njengoko ulandelwe ngugqirha wakho. Funda zonke iinkcukacha ezinikwe zona. Landela yonke imiyalelo ngokufutshane.
♦ Ukuze ufumane inzuzo enkulu, ungaphuthelwa amaxabiso.
♦ Qhubeka uthabatha eli gciwane (Megestrol acetate powder) njengoko uxelelwe ngugqirha okanye omnye umboneleli wezempilo, nokuba uziva kakuhle.
Yintoni endiyenzayo xa ndilahlekelwa umthamo?
♦ Thatha idosi ephosakeleyo ngokukhawuleza xa ucinga ngako.
♦ Ukuba sisondele kwixesha lakho elizayo, qhwala idosi ephosakeleyo uze ubuye kwixesha lakho eliqhelekileyo.
♦ Ungathathi i-2 i-doses ngexesha elifanayo okanye amanani angaphezulu.
4. Ziziphi izilumkiso ezikhethekileyo Ngaphambi kokuthatha i-megestrol i-acetate powder?
♦ xelele ugqirha wakho kunye ne-pharmist ukuba unobungozi kwi-megestrol i-acetate powder, nayiphina imishanguzo, okanye nayiphi na izithako ezingasebenziyo kwi-megestrol i-acetate powder, ukumiswa, okanye ukumiswa okugxininisiweyo. Buza ugqirha wakho okanye umseli-mveliso uluhlu lwezithako ezingasebenzi.
♦ xelele ugqirha wakho kunye nekhemistiya ukuba yiyiphi imithi yonyango kunye non-prescription, iivithamini, izongezelelo zondlo, kunye nemveliso yemveliso oyithathayo okanye uceba ukuyithatha. Qinisekisa ukukhankanya ama-antibiotics kunye ne-indinavir (i-Crixivan). Ugqirha wakho unokufuna ulungelelanise amanani akho amayeza okanye ubeke iliso ngononophelo kwimiphumo emibi.
♦ xelele ugqirha wakho ukuba unayo okanye uke waba ne-blood clot naphi na emzimbeni, isifo, isifo sikashukela, okanye isifo okanye isifo sesibindi.
♦ xelela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe, cwangcisa ukuba ukhulelwe, okanye uncelise. Ukuba ukhulelwe ngelixa uthabatha i-megestrol i-acetate powder, biza ugqirha wakho ngokukhawuleza. i-megestrol i-acetate powder ingalimaza umntwana. Ungasondli ngesondlo ngelixa uthatha i-megestrol i-acetate powder.
♦ kufuneka uqonde ukuba i-megestrol acetate powder ingaphazamisa umjikelezo oqhelekileyo wokuya esikhathini. Nangona kunjalo, akufanele ucinge ukuba awukwazi ukukhulelwa. Sebenzisa indlela ethembekileyo yolawulo lokuzalwa ukukhusela ukukhulelwa.
♦ Ukuba utyunjwa, kuquka nokuhlinzwa kwamazinyo, ngethuba okanye kungekudala emva kokuba unyango lwakho, xelele ugqirha okanye wamazinyo ukuba ukuthatha i-megestrol acetatepowder.
Thatha ngqo njengoko ugqirha wakho ugqirha. Ungathathi kwixabiso elikhulu okanye elincinci okanye ixesha elide kunconywayo. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho yemithi.
Gxininisa ukumiswa komlomo (utywala) kakuhle ngaphambi kokuba ulinganise umthamo. Ukulinganisa utywala kunye nekhasi elilinganayo lokulinganisa umthamo okanye inkomishi yamachiza, kungekhona ngekhasi eliqhelekileyo letafile. Ukuba awunayo ifowuni yokulinganisa i-dose, cela ikhemistiki yakho enye.
I-Megace ES iqulethe i-concentration ye-megestrol ye-acetate powder kune-Megace. Ukuba ugqirha wakho utshintshe uphawu lwakho, amandla, okanye uhlobo lwe-megestrol i-acetate powder, iimfuno zakho zitshintshi. Buza i-pharmist yakho ukuba unemibuzo malunga neyeza ofumene kwikhemisi.
Iimfuno zakho zemilinganiselo zingatshintsha xa utyunjwa, zigula, ziphantsi koxinzelelo, okanye unentsholongwane. Ungatshintshi idiza okanye i-shedyuli yakho ngaphandle kweengcebiso zegqirha. Gcina kwiqondo lokushisa elisekude kumanzi kunye nobushushu.
6. Sebenzisa Meestrol acetateUbuninzi kwiindawo ezithile
Ubunzima beCandelo X [bona izilumkiso kunye nokuqapha (5.2)]. Akukho lwazi olwaneleyo lwe-animal teratology olutholakala kwiiyithithi ezifanelekileyo zonyango. Iigumbi ezikhuphayo eziphathwe ngamanqanaba amancinane we-Megestrol i-acetate powder (i-0.02-phinda i-dose ekliniki ekhuthazwayo) yabangela ukunciphisa ubunzima bomntwana kunye nenani lokuzalwa ngokuzalwa, kunye nokusetyenzwa kwezilwanyana zesisu.
♣ Oomama abanesihlengikazi
Ngenxa yefuthe lemiphumo emibi kwiintsana, unesikelo kufuneka ivalwe ukuba i-Megestrol i-acetate powder iyadingeka.
♣ Ukusetyenziswa kwezilwanyana
Ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kwizigulane zezilwanyana akuzange kusekwe.
♣ Ukusetyenziswa kweGeriatric
Ucwaningo lwezonyango lwe-Megestrol i-acetate powder ekwenzeni unyango lwe-anorexia, i-cachexia, okanye ukulahleka kwesisindo esicacisiweyo kwizigulane ezine-AIDS azange zibandakanye inani elaneleyo lezigulane ezineminyaka eyi-65 iminyaka nangaphezulu ukuqinisekisa ukuba ngaba baphendula ngokungafani nezigulane eziselula. Amanye amava eenkliniki avakalisiweyo awazange achaze ukungafani kwezimpendulo phakathi kwezigulane ezisebekhulile nabancinci. Ngokuqhelekileyo, ukhetho lwezonyango kumguli osekhulile kufuneka luqaphele, ngokuqhelekileyo luqala kumgangatho ophantsi lwesilinganiselo se-dosing, ebonisa ukuphindaphinda kobuninzi be-hepatic, ye-renal, okanye ye-cardiac function, kunye nesifo esivumelanayo okanye ezinye iziyobisi.
I-Megestrol i-acetate powder iyaziwa ukuba ikhunjulwe kakhulu yizintso, kwaye ingozi yeempendulo zetyhefu kule nkunkuma ingaba zikhulu kwizigulane ezingasebenzi. Ngenxa yokuba izigulane ezisebekhulile zinokuthi ziye zinciphisa umsebenzi wenkunzi, kufuneka unyamekele ekukhetheni kwenzalo, kwaye kunokuba luncedo ukubeka iliso umsebenzi wentshukumo.
♣ Sebenzisa kumaTyhini
I-Megestrol i-acetate powder iye yayinokusetyenziswa okungaphelelanga kwabasetyhini abane-HIV. Bonke abafazi be-10 kwiimvavanyo zeklinikhi babika ukuphuma kwegazi. I-Megestrol i-acetate powder iyisiphumo seprogesterone, esinokubangela ukuphuma kwegazi kumfazi.
Gcina le nyilisi kwisitya, ivalwe ngokuqinileyo, kwaye ingafiki kubantwana. Yigcine kwiqondo lokushisa lokushisa kwaye kude nobushushu obuninzi kunye nobumanzi (kungekhona kwindawo yokuhlambela).
Amachiza angenagunya kufuneka alahlwe ngendlela ezizodwa zokuqinisekisa ukuba izilwanyana, abantwana kunye nabanye abantu abanakuzidla. Nangona kunjalo, akufanele uhlalutye le mayeza kwizindlu zangasese. Endaweni yoko, indlela efanelekileyo yokulahla amayeza akho ngeprogram yokubuyisela iyeza. Thetha kumakhomistiki okanye qhagamshelana nomnyango wendawo yokulahla / uhlaziyo kwakhona ukuze ufunde malunga neenkqubo zokubuyisela kuluntu. fumana i-www.aasraw.com ngolwazi oluninzi ukuba awukwazi ukufikelela kwinkqubo yokubuyisela.
8. Mi-egestrol acetateimiphumela
I-Megace (i-megestrol acetate, i-USP) I-Oral Suspension iyimichiza eyenziwe ngumntu efana ne-hormone progesterone esetyenziselwa ukuphatha ukulahleka kwesidlo kunye nokulahlekelwa kwesisindo ngenxa yezifo, kwaye isetyenziselwa unyango lomhlaza wesifuba ophezulu kunye nomdlavuza we-endometrial. I-Megace ifumaneka kwifomu yobudala. Iziphumo eziqhelekileyo zeMegace ziquka:
· ukutyeba kwakho
Ingxaki yokulala (ukulala)
· Ukunciphisa ikhono lobulili / umnqweno
Inkathazo ibe ne-orgasm
Abasetyhini banokufumana utshintsho kwixesha lokuya esikhathini, kuquka ukuphuma kwegazi elingenakulinganiswa Ukumiswa komlomo weMegace 800 mg / ngosuku (20 mL / ngosuku). I-Megace inokusebenzisana ne-insulin okanye ngomlomo wesifo sikashukela kwaye inganciphisa iziphumo zala mayeza, kunye namanqanaba eshukela egazi anganda. Ukuba unesifo sikashukela, jonga iswekile yegazi kwaye uthethe ugqirha ukuba ubona utshintsho olungavamile. I-Megace inokusebenzisana ne-indinavir, okanye i-insulin okanye imithi yesifo sikashukela yomlomo. Tshela ugqirha wakho onke amayeza kunye nezongezelelo ozisebenzisayo. I-Megace ayinakusetyenziswa ngexesha lokukhulelwa. Kungabangela ingozi kumntwana. Abafazi beminyaka yokubeletha kufuneka basebenzise ulawulo lokuzalwa ngenkathi basebenzisa le mayeza. La mayeza angadlula ubisi lwebele kwaye abe nemiphumo engathandekiyo kumntwana onesibeleko. Ukunceliswa kwesisu akukhuthazwa ngelixa usebenzisa le chiza.
I-Megace yethu (i-megestrol acetate, i-USP) Iimpawu zecala Iziko leMithi leDrama libonelela ngembono olubanzi lweenkcukacha ezikhoyo zonyango malunga neziphumo ezichaphazelekayo xa uthatha le mayeza.
Oku akusiyo uluhlu olupheleleyo lweempembelelo kwaye abanye bangenzeka. Shayela ugqirha wakho kwiingcebiso zonyango malunga nemiphumo emibi. Ungabika iziphumo ezimbi kwi-FDA kwi-1-800-FDA-1088.
9. I-Megestrol Acetate Usetyenziso lwe-Weight Gain kufuneka liqwalaselwe ngokucophelela
Meestrol acetate (595-33-5) yintsebenziswano ye-progestational enefuthe elinamandla kwisondlo. Ekuqaleni yayisetyenziswa njenge-arhente yokukhulelwa; nangona kunjalo, umphumo oqhelekileyo wesisindo sokunyuka kwesisindo kwakhokelela ekusebenziseni kwayo njengamalungu e-orexigenic. Ulawulo lwe-MA kwiziphumo ekunyuseni okuninzi kwondlo kunye nesisindo somzimba kwizigulane ezinxulumene ne-HIV kunye kunye nalabo abanomdlavuza. MA okwangoku i-Food and Drug Administration (FDA) evunyelwe Ukulahlekelwa kwesisindo seHIV. Ukongeza, bobabini abantu abadala kunye nabantu abadala abakhulileyo abahlala kwiindawo zokunyamekela kwexesha elide, ukusetyenziswa kwe-MA kubangele ukwanda kwenyameko emzimbeni. Ukusetyenziswa kwee-orexigenic agents ezifana ne-MA kwezi zicwangciso zifanelekileyo kuba ukulahlekelwa kwesisindo sokuzibandakanya kuye kwahlanganiswa nokufa kwabantu. Enyanisweni, i-MA inefuthe elikhulu ekuziphatheni komzimba kunye nesidlo kunamanye ama-orexigenic agents ezifana ne-dronabinol kunye ne-eicospentaenoic acid. Nangona kunjalo, kubantu abadala kunye nezigulane ezinomdlavuza okanye ukungaphumeleli kwe-renal, inqununu yinqununu okanye iyona yodwa inzuzo yokufumana ubunzima, ngokungenakuncipha kwe-squelettic muscle okanye ezinye izinto ezingenamafutha angenamafutha. Phakathi kweempembelelo ezininzi zokusetyenziswa kwe-MA, ukunyanzelwa kwe testosterone kunye ne-estrogen yokuvelisa kubonakala. Ngaphambi kokusetyenziswa kolunye uhlobo lwezonyango zokunyanzelisa i-androgen (flutamide, bicalutamide) kumadoda anomdlavuza wesibeletho, i-MA yayivame ukusetyenziswa kule ndlela. Enyanisweni, kumadoda amadala, ukusetyenziswa kwe-MA kukhokelela kumanqanaba afutshane ase-testosterone. I-MA iphinde isetyenziswe ekunciphiseni amanqanaba e-estrogen kubasetyhini abanomdlavuza wesibele.
Uphando olupapashwe kule nyanga ku-JCEM luhlolisise imiphumo ehlangeneyo ye-testosterone kunye ne-MA ekubunjweni kokufumana ubunzima kwizigulane ezine-HIV ezichaphazelekayo. Olu pho nonongo lubonisa kwakhona ukuba i-MA inefuthe elikhulu kwisondlo kunye nesisindo somzimba, kunye namafutha athola icandelo eliyinhloko lokunyuka komzimba. Nangona kunjalo, ubunzima obungenamafutha bunyukisiwe kunye nobunzima bomzimba kulo mvavanyo, olufana nokuhlolwa kwangaphambili kwefuthe le-MA ekufumaneni isisindo kwizigulane ezine-HIV ezichaphazelekayo. U-Mulligan et al-onsho ukuthi i-testosterone yayicinezelwe, kwaye ukutshintshwa kwe-testosterone kwakungekho mpe mbelelo ekubunjweni kwenzuzo yesisindo; Ngaphezu koko, ukulawulwa kwe-MA kwaphumela ekunciphiseni i-libido. Oku kuphazamiseka kwe-MA kwi-testosterone ukuvelisa kwaye ukuvimbela imiphumo ye-testosterone kwi-mass body accrual kufuneka iqwalaselwe ngokucophelela ngaphambi kokuba isebenzise i-MA kwesi si gulane. Ukulahlekelwa ubunzima obuxhomekeke kwizigulane ze-HIV kugxininiswe kakhulu kwizinga eliphezulu ze-androgen.
Imibuzo engaphenduliyo malunga nemiphumo ye-MA ihlala. Ukusetyenziswa kwayo kufuneka kuqwalaselwe ngokucophelela kwaye ilawulwe ngokucophelela. Ukuba ukuphuculwa kwesondlo kunye nenzuzo kwinqununu yezilwanyana kuyiminqweno enqwenelekayo ekulawuleni i-cachexia okanye ukulahleka kokunciphisa umzimba, i-MA ihlala enye yeeyoriginic ezisemgangathweni ezikhoyo ngoku zikhoyo. Ukusetyenziswa kwayo kufuneka kulinganiswe nekhono lokunciphisa i-adrenal kunye nokunciphisa imveliso ye-androgen. Ngenxa yempahla yayo ye-antiandrogen, i-antianabolic impembelelo ye-MA ayilungiswanga ngu-testosterone.
10. Yintoni eyona nkcazelo ebaluleke kakhulu ukuba ndiyazi malunga ne-Meestrol Acetatepowder?
I-Megestrol i-acetate powder ingalimaza umntwana ongakazalwa okanye kubangele ukukhubazeka kokuzalwa. Ungasebenzisi i-megestrol ukuba ukhulelwe.
Ngaphambi kokuba uthathe i-megestrol i-acetate powder, xelela ugqirha wakho ukuba unesifo sikashukela okanye imbali yokubetha okanye i-clot yegazi.
Iimfuno zakho zemilinganiselo zingatshintsha xa utyunjwa, zigula, ziphantsi koxinzelelo, okanye unentsholongwane. Ungatshintshi idiza okanye i-shedyuli yakho ngaphandle kweengcebiso zegqirha.
I-Megace ES iqulethe i-concentration ye-megestrol ye-acetate powder kune-Megace. Buza i-pharmist yakho ukuba unemibuzo malunga neyeza ofumene kwikhemisi.
11. Ndingafumana phi ulwazi olungakumbi kwi-Meestrol Acetate?
♣ Igama lomthi: Megace®, Megace® ES
tags: uthenge i-Megestrol i-acetate powder, Megestrol acetate powder
Shiya A Comment
Nceda ufake igama lakho. Nceda faka idilesi ye-imeyile efanelekileyo. Nceda ufake umyalezo.
Ingakanani i-4-DHEA ifumana i-Testosterone? Uvavanyo lweMithi ye-J147 (1146963-51-0) I-Alzheimer's Aging